Fampiharana ofisialy Visa any India - Ampiharo ny Visa any India amin'ny Internet | Visa an-tserasera India
Fampiharana eVisa ao India
Maherin'ny 99.5% visa no nankatoavina tao anatin'ny latsaky ny 1 andro
1. Fampiharana e-Visa feno
2. Raiso ny e-Visa amin'ny alàlan'ny mailaka
3. Midira India
Fangatahana eVisa an-tserasera ho an'i India
Governemantan'i India dia nandefa alalana amin'ny elektronika na eTA ho an'i India izay mamela ny olom-pirenena amin'ny firenena 180 handeha any India nefa tsy mitaky tombo-kase amin'ny pasipaoro.
Hatramin'ny 2014 dia tsy mila mangataka ny taratasy nentim-paharazana Visa any India ny mpandeha iraisampirenena XNUMX izay te-hitsidika an'i India mba hahafahany misoroka ny olana tsy maintsy ampiarahina amin'izany fampiharana izany. Raha tokony handeha ao amin'ny Masoivohon'i India na Consulat, ny Visa India dia azo alaina amin'ny Internet amin'ny endrika elektronika izao.
Ankoatry ny fahatsoran'ny fangatahana Visa amin'ny Internet dia ny e-Visa ho an'i India ihany koa no fomba haingana indrindra hidirana ao India.
Inona moa ny Visa Indiana elektronika (India e-Visa)?
Izy io dia visa elektronika mamela ny mpitsidika vahiny hitsidika an'i India amin'ny fizahan-tany, ny fahitana, ny asa, ny fitsidihana ara-pitsaboana na ny kaonferansa. Misy isa-sokajy hafa koa isaky ny karazana visa.
Ny mpitety vahiny rehetra dia takiana hitana eVisa India na visa tsy tapaka alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena araka ny fetrany Manampahefana an'ny fifindra-monina Indiana.
Karazana e-Visa any India
Misy karazana e-Visa isan-karazany ho an'i India ary ny iray izay tokony hangatahanao dia miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihanao an'i India.
Ilay e-Visa mpizaha tany
Raha mitsidika an'i India ho mpizahatany ianao amin'ny tanjon'ny fitsangatsanganana na fialam-boly, dia ity no e-Visa tokony hangatahanao. Misy karazana visa fizahantany 3.
The Visa 30 mpizahatany India, izay mamela ny mpitsidika hijanona ao amin'ny firenena 30 andro aorian'ny datin'ny fidirana miditra amin'ny firenena ary a Visa fidirana indroa, izay midika fa afaka miditra indroa ao amin'ny firenena ianao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny valin'ny Visa. Ny Visa dia manana Lany daty amin'ny, izay daty alohan'ny hidiranao amin'ny firenena.
Ny Visa 1 mpizahatany India 365 taona, izay manan-kery mandritra ny XNUMX andro aorian'ny datin'ny famoahana ny e-Visa. Ity dia Visa fidirana marobe, izay midika fa afaka miditra amin'ny firenena im-betsaka ianao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny valin'ny Visa.
Ny Visa 5 mpizahatany India 5 taona, izay manan-kery mandritra ny XNUMX taona hatramin'ny datin'ny namoahana ny e-Visa. Ity koa dia Visa ampidirina Multiple.
Raha mitsidika an'i India amin'ny tanjon'ny orinasa na varotra ianao, dia ity no e-Visa tokony hangatahanao. Izany dia manan-kery mandritra ny herintaona na 365 andro ary a Visa fidirana misimisy.
Raha mitsidika an'i India amin'ny maha-marary anao ianao mba hahazo fitsaboana amin'ny hopitaly any India, dia ity no e-Visa tokony hangatahanao. Visa fohy izy io ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana an'ny mpitsidika ny firenena. Izy io koa dia a Visa fidirana telo, izay midika fa afaka miditra ny firenena intelo ianao ao anatin'ny vanim-potoana maha-ara-dalàna azy.
Mpanatrika fitsaboana e-Visa
Raha mitsidika ny firenena hiaraka amin'ny marary iray izay manaraka fitsaboana any India ianao, dia io no e-Visa tokony hangatahanao. Visa mandritra ny fotoana fohy ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana an'ny mpitsidika ny firenena. Visa tsy tonga amin'ny mpitsabo 2 ihany no omena amina Visa ara-pitsaboana iray, izay midika fa olona roa ihany no afaka mandeha any India miaraka amin'ny marary izay efa nahazo na nangataka Visa Visa.
Ireo e-Visa rehetra ireo dia mamela anao hijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 180 andro fotsiny (na latsaka raha toa ka 30 andro na 60 andro fotsiny no manan-kery) fa ny sasany amin'izy ireo dia visa avo roa heny, telo heny, na maromaro. afaka miditra amin'ny firenena indray ianao raha mbola manan-kery ny Visa. Ary koa, ny e-Visa Indiana rehetra dia azo ampiharina amin'ny in-3 monja ao anatin'ny herintaona.
Mba hahafahanao mahazo ny e-Visa karana ilainao
ho olom-pirenena amin'ny iray amin'ireo firenena 165+ izay olom-pireneny no afaka mahazo ny Visa any India.
ny tanjon'ny fitsidihanao dia ny fizahantany, orinasa, na fitsaboana.
hiditra ny firenena raha tsy amin'ny alàlan'ny Post ofisialy Immigration Check izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo 5.
Takiana aminao ihany koa ireto:
Ny kopian'ny sarin-doko misy ny pasipaoro an'ny mpitsidika (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona iray), adiresy mailaka miasa, ary carte debit na carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana.
A tapakila miverina na mandroso ivelan'ny firenena.
Fepetra takiana manokana amin'ny karazana e-Visa tadiavinao.
Ireo olom-pirenena amin'ireo firenena voatanisa etsy ambany dia mahazo alalana amin'ny Visa India Online.
Repoblika Cameron Union
Sina- SAR Hongkong
Sina- SAR Macau
Saint Christopher sy Nevis
Nosy Turks sy Caicos
Tanànan'i Vatican-Holy See
Ny fizotry ny fangatahana e-Visa Indiana
Ny fangatahana ny e-Visa karana dia tena tsotra sy mivantana. Mila mangataka farafahakeliny 4-7 andro ianao alohan'ny datin'ny fidiranao ao amin'ny firenena. Azonao atao ny mameno ny fangatahana fangatahana ho azy an-tserasera ary manao ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny vola amin'ny firenena 135 izay avela ny vola.
Alohan'ny fandoavam-bola dia mila manome antsipiriany manokana ianao, antsipirian'ny pasipaoro, toetranao ary ny antsipirian'ny heloka bevava taloha. Aorian'ny fandoavana ny vola dia angatahina ianao hanome vaovao fanampiny mifototra amin'ny tanjon'ny fitsidihanao sy ny karazana Visa tadiavinao. Tsy maintsy manome izany ianao amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka alefa amin'ny mailakao. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fanapahan-kevitra ho an'ny Visa dia horaisina ao anatin'ny 3-4 andro ary raha ekena ianao dia hahazo ny visa elektronika an-tserasera. Tsy maintsy mitondra kopia malefaka misy pirintan'ity e-Visa ity hiaraka aminao mankany amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Tsy tokony hahita fahasahiranana amin'ity dingana ity ianao fa raha mila fanazavana ianao dia tokony Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk ho fanohanana sy fitarihana.
Tombontsoa azo avy amin'ny fampiharana miaraka aminay
MISY ZAVATRA TOETRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA NY FAMPIANARANA NY FIVORIANA E-VISA INDRINDRA ANAO
Afaka mampihatra an-tserasera 24/7 365 andro isan-taona.
Alohan'ny handefasana ny fangatahana any amin'ny Ministeran'ny Atitany India, ny mpitsabo ny Visa dia mandinika sy manitsy azy.
Ny fizotran'ny fampiharana efa natao.
Fanitsiana ny vaovao tsy hita na diso.
Fiantohana ny fiainana manokana sy fiarovana mandritra ny dingana rehetra.
Fanamarinana fampahalalana fanampiny takiana.
Fanohanana sy fanampiana 24/7.
Visa elektronika Indiana nankatoavina nalefa tamin'ny mpangataka tamin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny endrika PDF.
Famerenana amin'ny laoniny ny e-Visa raha sendra very ny mpangataka.
Avereno ny vola raha nolavina ny e-Visa.
Tsy misy fiampangana amin'ny fifanakalozana ara-bola amin'ny banky 2.5%.